राधा र कृष्णको प्रेम किन सफल भएन, यी हुन मुख्य ४ कारण ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सोमबार, कात्तिक २४ २०७७
जब साँचो प्रेम र विश्वासको कुरा हुन्छ, तब सबैभन्दा पहिला भगवान् श्रीकृष्ण र राधाको प्रेम जोडिन्छ । कसैको प्रेम सफल हुने बित्तिकै हामी वाह ! कस्तो प्रेम राधा-कृष्णको जोडीजस्तो लगायतका शब्दबाट तारिफ गर्छौ । तर, राधा र कृष्णबीच अत्यन्तै निकट प्रेम भए पनि विवाह भने हुन सकेन । किन त ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, फाल्गुन १६ २०७७ १८:००:२९